गजेन्द्र बाेहरा सोमबार, चैत २३, २०७७
२०६५ साउन ६ गते तत्कालीन संविधानसभा भवनमा भएको निर्वाचनमा डा. रामवरण यादव नेपालको प्रथम राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए।
निर्वाचित भएलगत्तै उनी सरासर बालुवाटर पुगे। त्यहाँ प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला बसिरहेका थिए। एकछिन कुरेपछि कोइराला भेटघाट कक्षमा आए।
रामवरणलाई देख्नासाथ गिरिजाले ठाडै भने– ‘तिमी किन यहाँ आएको? अब त तिमी राष्ट्रपति भइसक्यौ। म तिमीलाई भेट्न आउँछु। अबदेखि तिमी यहाँ आउने होइन।’
साउन ८ गते राष्ट्रपतिका रुपमा डा. रामवरण यादवले सपथ लिए। सपथग्रहण समारोहमा कोइराला पनि उपस्थित थिए।
त्यसपछि लगभग उनीहरूको भेटघाट भएन।
गिरिजाप्रसाद कोइराला, यादवको राजनीतिक जीवनका एक आदर्श हुन्। कोइराला परिवारले सिकाएको राजनीतिक आदर्शका बाटाहरू उनले अहिलेसम्म पछ्याउन छोडेका छैनन्।
एकप्रकारले भन्दा त्यो बेलासम्म यादवका लागि कोइराला ‘गड–फादर’ नै थिए।
गिरिजाप्रसाद कोइराला लगभग राष्ट्रपतिलाई भेट्न उनको निवास गएनन्। यादवको मनमा गिरिजा भेट्ने ‘हुटहुटी’ थियो।
गिरिजा न हुन्, रामवरण यादवलाई भेट्न त उनी किन पो जान्थे र!
गिरिजालाई भेट्न जाउँ, फेरि किन आएको? भनेर हप्काइ नै खानुपर्छ। आफूलाई भेट्न गिरिजा आउने कुरा भएन। रामवरणलाई गिरिजा भेट्न छटपटी बढ्दै थियो। उनी भित्रभित्रै छटपटिइरहेका थिए।
त्यही बीचमा एकदिन उनलाई खबर आयो– गिरिजाप्रसाद कोइराला अस्वस्थ।
यादवले बहाना भेटिहाले। तुरन्तै उनी फेरि बालुवाटार हानिए। कसैलाई नभनी। झन्डै उनका सुरक्षाकर्मीलाई सकसै भो।
राष्ट्रपति यादवलाई देखेर गिरिजाले फेरि भने– किन आको?
राष्ट्रपतिले उत्तर दिए– गिरिजाबाबु बिरामी हुनुहुन्छ भनेर भेट्न आको।
गिरिजाले भने– म त्यति धेरै बिरामी होइन। अब राष्ट्रपति जस्तो मान्छे।
यादवले फेरि भने– म पनि डाक्टर हुँ। गिरिजाबाबुको हेल्थ बुझ्न भनेर।
गिरिजाले भने–पर्दैन राष्ट्रपति त अब यहाँ आउने होइन। डाक्टर त अब यहीँ पनि छन् नि!
राजनीतिक आदर्शले जोडिएको यो एउटा गाढा सम्बन्धले जन्माएको हुटहुटी थियो यो।
त्यसपछि लगभग उनीहरूको भेटघाट नै भएन। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अन्तिम अवस्थामा भने राष्ट्रपति यादव फेरि भेट्न पुगेका थिए।
अब यता फर्कौं–
एउटा पुस्तकालय अवलोकनका लागि डल्लु पुगेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भन्डारी खुसुक्क एमालेका नेता झलनाथ खनालको घर पुगिन्।
मिर्गौलामा समस्या आएपछि केही समयअघि खनाल भारत पुगेर उपचार गराएका थिए। तर, अहिले केही स्वस्थ छन्। यद्यपि उनको मिर्गौलामा दीर्घकालीन समस्या देखिइसकेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्।
तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र एमालेको एकता र त्यसपछिका बिग्रह अनि सर्वोच्चको एउटा फैसलापछि भंग भएको त्यो एकता।
पार्टीभित्रको किचलो अहिले पनि साम्य भइसकेको छैन। सुरुदेखि नै केपी ओलीबाट अलग बाटो रोजे। घर त एउटै भनिरहेका छन्। तर, ‘भान्सा’ छुट्टिएजस्तै भएको छ। माधव नेपाल अनि झलनाथ खनालहरूकाे अवस्था।
राष्ट्रपति किन झलनाथ खनालको घर छिरिन्?
धेरैले भनिरहेका छन्–खनालको स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा जानकारी लिन।
तर, खनाल आफैंले एमालेभित्रको विवाद अनि ओलीसँग एकताबारेमा कुराकानी भएको बताइसकेका छन्। उनी आफैले अहिले स्वस्थ नै रहेको दाबी पनि गरेका छन्।
र, राष्ट्रपतिसँगको भेटबारे उनले पत्रकारहरूसँग भनेका छन्– म स्वस्थ नै छु। मेरो स्वास्थ्य अवस्था सामान्य नै छ। म मिटिङहरूमा गइरहेको छु। बैठकहरूमा गइरहेको छु।
स्वास्थोपचारपछि खनाल निरन्तर राजनीतिक कार्यक्रमहरूमा सहभागी भइरहेका छन्। उनले भनेजस्तै बैठक अनि कार्यक्रमहरूमा पुगेकै छन्।
केही दिनअघि ओलीले बोलाएको एमाले संसदीय दलको बैठकमा पनि खनाल सहभागी भएका थिए।
आइतबार नै यो समूहले काठमाडौंमा ‘समानान्तर’ कमिटी बनाएको छ। त्यसको घोषणामा पनि खनालले भाषण गरेका छन्।
राष्ट्रपतिका तर्फबाट अनौपचारिक रुपमा आएको स्पष्टिकरण अनुसार उनी खनालको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न त्यहाँ पसेकी हुन्।
तर, खनाल आफैले राजनीतिक कुराकानी भएको भनिरहेका छन्।
‘म स्वस्थ नै छु। मेरो स्वास्थ्यको चिन्ता होइन। बरु एमाले अस्वस्थ छ। मलाई त हाम्रो पार्टीको पो चिन्ता छ’ उनले भनेका छन्– हाम्रा राष्ट्रपति हाम्रो राष्ट्रकै अभिभावक हो। संविधानको परिपालक हो। लोकतन्त्र अनि गणतन्त्रको पनि अभिभावक हो। हाम्रो पार्टीको लामो समयसम्म कार्यकर्ता भएर काम गरेको हो। म नेता हुँदा पनि उहाँ कार्यकर्ता नै हुनुहुन्थ्यो। अहिले सम्मानित पदमा पुग्नुभएको छ। त्यसैले पनि पार्टीका पुराना नेतालाई सम्झेर आएकोमा म त खुसी नै छु। सबै पार्टी बलियो भएमात्रै लोकतन्त्र अनि गणतन्त्र सुदृढ हुन्छ भन्ने उहाँको चाहना हो।’
खनालले भनेजस्तो ‘लोकतन्त्र त गणतन्त्र’ सुवास र गन्ध राष्ट्रपति थाहा पाउँछिन् कि पाउँदिनन् त्यो एउटा विश्लेषण होला। तर, अन्तर्य यही हो– देशको भन्दा उनलाई पार्टीकै प्यार बढी छ।
प्रथम राष्ट्रपति त्यसरी सुटुक्क अनि खुसुक्क कसैलाई पनि भेट्न कहीँ कतै गएनन्।
‘लगभग मैले सम्झिएसम्म राष्ट्रपति यादव त्यसरी कसैलाई भेट्न गएको थाहा छैन। त्यो बेला देशमा एक किसिमको संक्रमण नै थियो। त्यसैले बेला बेलामा सबै पार्टीहरूका नेतालाई बोलाएर छलफल गर्नुहुन्थ्यो’ राष्ट्रपति यादवका सल्लाहकार समूहका एकजना सल्लाहकारले भने ‘तर उहाँले त्यसरी कहिलै कसैलाई राजनीतिक नियतले भेटेको थाहा छैन।’
उनका अनुसार त्यो बेला राष्ट्रपति यादवले कसैसँग भेट भएको बारे तत्कालै सञ्चार हेर्ने समूहले विज्ञप्ति निकालेर जानकारी दिइहाल्थ्यो। के-कस्तो कुरा भयो, के कुराकानी भयो र भेटघाटको उद्देश्य के थियो भन्नेबारे एकैछिनमा सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भइसकेका हुन्थे। त्यो पनि राष्ट्रपति कार्यालयबाटै।
तर, आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भन्डारी!?
प्रधानमन्त्री केपी ओली कतिबेला शितल निवास छिर्छन् थाहै हुन्न। न कुनै सूचना न कुनै जानकारी। कति बेला के निर्णय गर्छन् वा कुनचाहिँ प्रस्ताव गर्छन् सायद राष्ट्रपति कहिलै पढ्दैनिन्।
ओलीले पठाए, बस् राष्ट्रपतिले ‘सही छाप’ ठोकिहाल्छिन्।
तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भन्डारी खुलेआम नेताहरूलाई शितल निवास बोलाउँछिन्। कतिबेला कुन नेतालाई बोलाउँछिन्? के कुरा गर्छिन्?
आम नगरिकले न प्रश्न गरेका छन् न सरकारले जवाफ दिएको छ।।
कसलाई किन भेट्ने? कसैलाई भेट्न जाने कि भेट्न बोलाउने? वा कसलाई भेटघाटका लागि समय मिलाउने? वा समय दिने?
‘प्रोटोकल’बारे भन्डारी कहिलै ‘सिरियस’ भइनन्। यो अलि सामान्य कुरा भयो यहाँसम्म कि – संविधानमै व्यवस्था नभएको ‘संसद विघटन’ गर्ने ओलीको प्रस्तावमा समेत उनले आँखा चिम्लेर सहीछाप गरिदिइन्।
त्यो संविधानसम्मत थिएन। पछि अदालतको फैसलाले पनि त्यसलाई प्रमाणित गरिदियो। तर, राष्ट्रपतिकाे ‘शब्दकोष’मा ‘नैतिकता’ भन्ने शब्द नै छैन्। तब आशा कहाँ हुन्छ? विद्यादेवी भन्डारीले नैतिकताको आधारमा पदत्याग गरुन्।
उनमा ‘नैतिकता’को सिङ्गो शब्दकोष छ। ‘लज्जाबोध’को सारा परिभाषा छ।
अनि पो राष्ट्रपति विद्या भन्डारीसँग केही छैन। नैतिकता न राजनीतिक संस्कार। तर, यो कुरा न कहिल्यै उनले बुझिन् न उनलाई कसैले बुझायो।
‘राष्ट्रपति संवैधानिक दायराभित्र हुन्छ। पदीय हिसाबले संविधानभन्दा माथि पनि चढ्न पाइँदैन। त्यसको दायराभन्दा बाहिर निस्किन पनि मिल्दैन’ ती सल्लाहकार भन्छन् ‘राष्ट्रपति भन्ने संस्था राजनीतिक स्टन्ट गर्ने ठाउँ पनि होइन। देशलाई नै दाउमा राखेर संविधान अनि कानुनको परीक्षण गर्ने निकाय पनि होइन।’
लोकतन्त्रमा फैलिएको एउटा सुन्दर ‘स्तोक्त्ति’ के हो भने ‘राजनीतिमा न कुनै मान हुन्छ न मर्यादा।’ राष्ट्रपतिबाटै तोडिएको घेरामाथि कहाँनेर जोडिएको ‘प्लाष्टर’ थप्नु?
तर, सब मर्यादालाई ख्याल राख्ने विद्या भन्डारी ‘मर्यादापालक’ होइनन्। उनी राष्ट्रको सबैभन्दा सम्मानित ‘शब्द’ हुन्। झलनाथ खनालले भनेजस्तै उनी सारा जनता अनि देशकै अभिभावक हुन्। एउटा कुनै अमुक पार्टीको संरक्षक होइनन्।
विद्या भन्डारी सब भइन्, मदन भन्डारीकी ‘पत्नी’ भइन्। नेकपा एमालेका नेता भइन्। दलका नेता भइन्। पार्टीका कार्यकर्ता भइन्। प्रधानमन्त्रीकी ‘रबर स्ट्याम्प’ भइन्। उनका नेता, कार्यकर्ता जसले जे चाह्यो त्यो सब भइन्। तर, उनी कहिल्यै ‘राष्ट्रपति’ हुन सकिनन्।